UTim Cook uthetha nabafundi beDyunivesithi yaseOxford | Ndisuka mac
UTim Cook uqhubeke notyelelo lwaseYurophu phakathi evekini, ephethe iflegi yokwakheka naphi na apho aya khona. Ngesi sihlandlo, undwendwele iYunivesithi yaseOxford, ukuvulwa kwe Isiseko seOxford, un indawo yoqeqesho entsha, apho bonke abafundi beyunivesithi eyaziwayo banokuthatha inxaxheba. Umphathi omkhulu weApple ubenembeko yokuvula izibonelelo ezitsha, kwaye kwangoko emva koko, uthathe inxaxheba kwisangqa ukuphendula imibuzo yabafundi kunye nootitshala, ababedidekile kukulula kukaCook ukuxelela iziqalo zakhe.
Ndithetha ixesha elide malunga nexesha lakhe emva kwekholeji, xa waqala ukukhangela umsebenzi, kunye nesigqibo sakhe sokujoyina iApple. Ekuqaleni, ndandikhangela umsebenzi ngokobizo, umsebenzi endandiwuthanda. Ngoku uyayibona ngokuqonda:
Ndabona ukuba injongo yobomi yayingekokuthanda umsebenzi wakho, kodwa yayikukusebenzela uluntu kuyo yonke indawo. Kwaye iziphumo zokwenza oko ziya kuthetha ukuba uyawuthanda umsebenzi wakho. Ndabona ukuba andikho kwindawo efanelekileyo yokwenza oko, emva koko ndatshintsha iinkampani.
Kuphela kusemva kokujoyina iApple apho amaxabiso kunye nomsebenzi wam waya kwicala elinye.
Nangona ukujoyina iApple kwakungekho sigqibo silula. Walinganisa izinto ezilungileyo nezingalunganga abantu abambonisa zona. Eyona nto iphambili kubo bonke kukuba wayehlala apho akhoyo. Kodwa intuition yakhe yamxelela ukuba kufuneka atshintshe. "Esi sesinye sezigqibo ezibaluleke kakhulu ebomini bam", uxelele abafundi.
Xa ebuzwa malunga neemveliso zeApple, wacebisa ukuba bazenze iimveliso abanqwenela ukuzisebenzisa, kwaye ukuba zilungile, zonke ziya kulandela. Cook naye wakhankanya, ukuba kubalulekile ukuba "usondele" kubathengi, bamamele uze uzenze zifikeleleke kubo. Esi sesinye sezizathu zokuba kutheni iApple ineevenkile ezithengisayo. Uveze ukuba uyakuthanda ukuchitha iyure yokuqala yosuku, efunda ii-imeyile ezivela kubathengi, kuba yeyona ndlela yokuva, ukwazi ukuba bacinga ntoni, baziva njani.
Ukuphefumlelwa kuka-Apple ngamagcisa, oogqirha, iimvumi kunye nabanye abasebenzisa iimveliso zeApple ukutshintsha umhlaba ngandlela thile. Ukusilela kuya kuza, kodwa kuya kufuneka unokholo kwaye baya kudlula.
Kuya kubakho amaxesha apho ungaphumeleli ngendlela emangalisayo. Ngokuqinisekileyo ndinayo. Kufuneka ube nokholo kwaye kuya kudlula. Jonga esipilini kwaye ujonge umntu ophefumlayo. Awufanga. Ayisiyongxaki inkulu emhlabeni. Kuya kwenzeka. Kwaye ndiyenza amaxesha amaninzi ngemini ngamanye amaxesha. Yenza loo nto okwexeshana kwaye awuzukuhamba kwakhona. Uyakwazi ukujongana nokusilela kwaye enyanisweni, awuyi kuzibona njengokusilela, kodwa njengezinto ozifundileyo, kwaye ayizukulimaza kangako.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » UTim Cook uthetha nabafundi kwiYunivesithi yaseOxford
Le yindlela esebenza ngayo iMeyile kwi-MacOS ePhakamileyo yeSierra